Horonan-tsary: ​​Media Matters | Martech Zone
Lahatsary: ​​raharaha media
Alahady 24 Febroary 2013 Douglas Karr
Omaly aho nanatrika ny Fetiben'ny sarimihetsika Franklin, fetibe fanao isan-taona mankalaza horonantsary misy soratra, horonantsary ary novokarin'ny mpianatra Franklin Indiana High School. Ireo horonan-tsary fohy dia nampihetsi-po avokoa ary nantsoina izay mpandresy Raharaha Media nataon'i Austin Schmidt sy Sam Meyer.
Ny horonantsary dia mifantoka amin'ny tsingerim-baovao ary mampitaha ny fahitalavitra, ny gazety ary ny radio eo an-toerana ary ny fomba hanarahan'izy ireo ny fitakiana atiny ho azy amin'ny alàlan'ny tranonkala sy media sosialy. Na dia misy aza ny fangatahana be dia be momba ny atiny ary zaraina amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo ny mpanatrika, ity tantara ity dia, ohatra, ohatra iray lehibe amin'ny zava-dehibe sy lakilen'ny asa fanaovan-gazety tsara. Ny bilaogy sy ny media sosialy dia fitaovana fampifandraisana sy famoahana haingana, fa ny atiny dia matetika tsy atao fikarohana tanteraka sy voarakitra an-tsoratra ho toy ny tantara nosoratan'ny mpanao gazety tsara.
Vaovao be dia be foana no ho lany be. Ny mpanao gazety dia tsy tokony hifaninana amin'ny tsingerim-baovao 24/7, tokony hanome ny halaliny ilaina izy ireo hahafantarantsika tsara ny lohahevitra iray. Heveriko fa izany no very tao amin'ny tolona eyeball ary izany indrindra no antony mahatonga ny mpamaky sy ny mpijery miala amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana. Tsy hoe aleo an-tserasera ny vaovao fa tsy vaovao tsara akory ny fanaterana ny vaovao. Manantena aho fa i Austin sy Sam dia nahalala izany rehefa nanoratra sy namolavola ny tantarany manokana izy ireo.
Ary antenaiko fa izany no ianaran'ny mpivarotra mamahana ilay biby koa. Ny fanoratana atiny ho an'ny fanoratana atiny dia mampanjavozavo ny fifantohan'ny mpihaino anao ary tsy manome azy ireo fampahalalana voafetra tadiavin'izy ireo. Manorata tsara, zarao matetika, ary manaova atiny miavaka.
Tags: austin schmidtdon Wettrickfetibe sarimihetsika franklinzava-dehibe amin'ny haino aman-jerysam meyer